Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. यस्तो रहस्य खुलेपछि निर्मलाका बुबाआमा काठमाडौँमा (भिडियोसहित) – Emountain TV
यस्तो रहस्य खुलेपछि निर्मलाका बुबाआमा काठमाडौँमा (भिडियोसहित)
काठमाडौं, २८ भदौ । हरितालिका तीज अर्थात हिन्दु नारीहरुको महान् पर्व हो । देशभरका हिन्दु नारीहरुले भगवान शिवको आरधानामा व्यस्त भईरहदा कञ्चनपुरमा भने तीजको कुनै रौनक भएन । कञ्चनपुरका महिलालाई यस बर्षको तीज, तीज जस्तै बनेन । रातो सारी र छड्के तिलहरीमा सजिएर, मन्दीर जाने ,पुजा गर्ने ब्रत बस्ने र मिठो संगितमा कम्मर मर्काइ मर्काइ नाच्ने रहर र परम्परालाई मनभित्रै थन्क्याएर, कञ्चनपुरका महिलाकालो सारीमा नगर परिक्रमा गरे र निर्मला हत्यारालाई सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
घटनाक्रमहरु यसरी नाटकिय बनिरहेको छ की आम नेपाली एउटा चलचित्रको दर्शक जस्तै बनिरहेका छन् । पर्दामा जे आइरहेको छ त्यो पत्याउन विवश छन् । बास्तविक्ता न कोही ओकल्ने आँट गर्छन न दोषी सार्वजनिक गर्न सक्छन् । बरु घटनाको छानबीन गर्न गठित उच्चस्तरिय छानबीन समितिकै पदाधिकारी राजीनामा दिन्छन् । तथ्यहरु नै पुरै तोडमोड भइरहेको यस्ता घटनाक्रमहरुले प्रष्ट पार्दै लगेको छ ।
घटनाको दिन लम्बीदै जाँदा घटनाका रहस्यहरु थप जटिल बन्दै गएको छ । घटनाक्रमले प्रमाणित गर्दै लगेको छ की सरकार बास्तविक हत्यार पत्ता लागिसके पनि शक्तिको आडमा दोषीलाई उम्काउन खोजीरहेको छ । यो घटना अब कञ्चनपुरको घटना मात्रै होइन, राष्ट्रिय हुदै अन्तराष्ट्रिय चासोको विषय बनिसकेको छ । सरकार अब पनि यस घटनालाई जोगाउन उद्यत भयो भने त्यसले स्वयम सरकारका लागि नमिठो झट्का लाग्ने निश्चीत छ ।
यस समाचार सम्बन्धि भिडियो हेर्न तलको लिन्क्मा क्लिक गर्नुहोस्: